Umgangatho we-shampoo kuxhomekeke ekubunjweni kwawo
Ungakhetha njani i-shampoo yeenwele? Ngaba ukhokelwa ngamashishini okanye iingcebiso zabahlobo? Ngaba uyithenga i-shampoo kwibhotile enhle kunye neqhaqha okanye into ecocekileyo kakhulu? Ayikho enye okanye enye, okanye yesithathu ayilunganga. Nokuba inkcazo yokuba i-shampoo enhle ifanele ikhube ngamandla - kungekhona ngokufanelekileyo. Umgangatho awuxhomekeke kwi-foam, kungekhona ngephunga, kungekhona kumbala kwaye kungekhona ekuhambeni kwe-shampoo. Umgangatho we-shampoo kuxhomekeke ekubunjweni kwawo.
Ngolu hlobo oluninzi lweemveliso zokunyamekelwa kweenwele, kunzima ukukhetha i-shampoo ephezulu kwivenkile efanelekileyo. Ukuze unqume ukuba ngaba kufanelekile kwiimpahla zakho zeenwele, kufuneka usebenzise ubuncinane kanye, ngenjongo enjalo, iisampuli ze-shampoos zenzelwe. Amafemu amaninzi amakhulu akhiqiza iincampu ze-shampoos, ngokuqhelekileyo zisasazwa ngaphandle kwentlawulo okanye ngentengo ehlawulelekayo kumthengi. Ukuba awukwazi ukusebenzisa iphenyi ngesizathu esithile, kodwa ufuna ukuthenga ngokufanelekileyo xa ukhetha i-shampoo, landela imigaqo engezantsi.
Khetha i-shampoo yeenwele zakho. Uncedo ngoku unokukhetha i-shampoo nokuba udidi lweenwele ezidibeneyo: ngeoli engaphezu kweengcambu kunye neengcebiso ezomileyo. Ungaze uthenge i-shampoo "kwintsapho yonke." Kwabantwana, i-shampoos hypoicergenic iyatholakala ukuthengiswa, kuba amadoda-amadoda, abajamelene neengxaki zabo zeenwele, kunye nathi, abafazi-kubafazi. Thenga i-shampoo ngokwakho, ngokuba impofu yazo zonke iintlobo zeenwele ayikho emgangathweni ophezulu kwaye ngokuqhelekileyo ayinakomeleza, kodwa isusa kuphela ukungcola.
I-shampoo efanelekileyo, ephezulu ifanele ibe nenxalenye engama-25 yomsebenzi osebenzayo. Akuyimfuneko ukuyazi ngeentliziyo okanye ukwenza uludwe lwala macandelo ukuze ukhangele ukufumaneka kwazo kunye ne-shampoo esitolo. Mane ubale inani lezithako kwi-shampoo kwilebula. Ukuba kukho abangaphezu kwama-20, i-shampoo inokuthi ikhuphe ngokukhuselekileyo ngerejista yemali. Ulungile.
Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwi-shampoo yeenwele ezinobungozi kakhulu, umzekelo, emva kokutshatyalaliswa kwezinto okanye ukutshintsha kweekhemikhali. Kule meko, khetha i-shampoo e-acidity ye-4.5-5.5. I-shampoo enjalo ayiyi kubomisa ngakumbi iinwele zakho, kodwa iya kubaphilisa kunye nokuthobela.
Musa ukujonga i-sales shampoos ngamanqaku kwilebula "yemvelo". Kufuneka ukwazi ukuba izithako zendalo (ezifana ne-burdock okanye i-oil castor) zinika i-shampoo impahla kwi-conditioner. Izinto ezinjalo azikwazi ukuhlambulula iinwele zokungcola, kodwa zilinganisa. I-effect yokuhlamba i-shampoo ingaba yinto efanelekileyo kuphela xa ixabiso elifunekayo lezinto ezibonakalayo ngaphakathi kulo, ezivela kwimvelaphi yazo.
Kakade ke, xa ukhetha i-shampoo, kungcono ukukhetha imveliso yeenkampani ezizonyango eziyaziwayo. I-Shampoos yamakhredithi adumile aqhuba izifundo kunye neemvavanyo ezininzi. Ukuthandwa kwabo kubangelwa ukuba bayasetyenziswa zizigidi zabasetyhini. I-shampoo yekhwalithi ayinakuhlambulula kuba isebenzisa kuphela imveliso ephezulu yemveliso. Ngoko ke, ukuba ubona umkhiqizo owaziwayo kwivenkile kwinqanaba elithengelayo, qaphela ukuthenga loo mveliso, inokuba yinto engafanelekanga. Nangona abavelisi abakhulu bahlala beqhuba izenzo zentlalo, abathengisi kufuneka baqaphele oku.
Ukuba uhlamba iinwele zakho nge-shampoo entsha, iinwele zakho zihlutha kakhulu, ke oku kuwuphawu olucacileyo lokuba i-shampoo ayihambisani nawe, kuba iqukethe izinto ezininzi ezinqabileyo ezomisa iinwele zakho. Ngokusebenzisa ixesha elide le-shampoo "engeyiyo" yakho, unobungozi obongezelelekileyo inzondo zakho: ziya kuba zomekile kwaye zingenampilo. Emva kokuhlamba iinwele nge-shampoo efanelekile kuwe, iinwele zakho kufuneka zibe zikhanyayo, zininzi (kodwa zingabonakali ngokugqithiseleyo), zithobela (kodwa zingabonakali). I-Shampoo ayifanele ibangele impembelelo kwaye ingabi nomsindo.
Ungasoloko utshintsha i-shampoo kwaye uzame rhoqo ngeveki ngemveliso emitsha. Izinwele aziyithandi utshintsho lwamahloni rhoqo. Kungcono ukhethe iintlobo ezininzi ze-shampoo, umzekelo, ezintathu, kunye nokusetyenziswa kwazo emva kweenyanga ezi-1-2 zokusetyenziswa. Ukuba usebenzisa i-shampoo yokwelapha (ngokuchasene ne-dandruff, ukusuka kwintlungu yokulahleka), utshintshe i-shampoo kwelinye kuphela emva kokugqitywa kwekhosi yonyango, ixesha ekufuneka liboniswe kwi-packpoff pack.
Ngoko ukuba iinwele zakho zihlala zikhutshwe ngempilo yazo, zikhanye kwaye zilukhuni, ngaphezu kwe-shampoo, zisebenzisa i-conditioners kunye neenwele zeenwele. Kanye ngeveki, kucetyiswa ukuba usebenzise imaski enondayo ngaphambi kokuba uhlambe iinwele zakho.
Ukulahleka kweenwele, izizathu kunye nezindlela zokonyango
Iindlela zokutshiza iinwele ezinomileyo
Iimaski zokunyamekelwa kweenwele ezinde
Indlela yokukhetha izimonyo ezifanelekileyo zokunyamekelwa kweenwele
Jelly kwi rhubarb
Ukuthengwa kunceda ukunciphisa umzimba
Ungayilahla njani i-flabby armpits?
Iibhokhwe ezinesibindi sesibindi kunye nemifuno
Ndiyakuvuyela ngoMhla Wabo Bonke Abathandekayo KwiProse: "Ukuziqhelanisa" Ukuqwalasela ngoFebruwari 14
Iipatata kunye noshizi ngumbumba
Iresiphi eyenziwe ekhaya
Ipompe ipayi kunye ne-cream yeoli
Yintoni endiyenzayo xa umntu egula?